Cryptex, codsi qoraalo ammaan ah oo bilaash ah waqti xaddidan | waxaan ka imid mac
Haddii aad ka mid tahay kuwa aad uga fikira ammaanka dukumentiyadaada, oo aadan rabin in qofna akhriyo waxaga, nasiib baad leedahay. Hadda, iyo wakhti xaddidan, Cryptex wuxuu ku jiraa xayeysiis si aad u soo dejisan karto bilaash.
Cryptex waa tifaftiraha qoraalka caadiga ah, sida kuwa kale oo badan oo aan ku isticmaalnay sannadihii shaqada ama guriga. Si kastaba ha ahaatee, si ka duwan tifaftirayaasha kale, isticmaala sir ammaan sare taasi waxay shaki la'aan ilaalin doontaa waxaadan rabin in la ogaado.
Cryptex si taxadar leh ayaa loo sameeyay qaadashada qoraalada, liisaska la qabanayo, iyo xitaa qorista ereyada sirta ah ama haynta joornaal. Iyada oo leh 128-bit AES iyo Twofish encryption algorithm, addoo isticmaalaya erayga sirta ah waxaad ilaalin kartaa wax kasta oo aad rabto inaad qorto. Maanta, halkaas oo sirnimadu ay noqon karto arrin, marnaba ma dhibayso inaad ka digtoonaato.
Sidoo kale, erayga sirta ah ee la isticmaalo waxaa si adag u ilaalin doona algorithms adag, si sirtu ay bixiso ammaan la yaab leh oo la isku halleyn karo, ka hortagga guulo laga gaaro weerarrada xoogga ah ee suurtagalka ah. Naxdintu waxay tahay in aan weli la cusboonaysiin si loogu isticmaalo arjiga iyada oo loo marayo raad-raaca, laakiin waxaan hubnaa in ay dhawaan ku dari doonaan horumarintan.
Qiimaha codsigan waa €5.99, laakiin hadda waxay ku socotaa xayeysiis waxayna diyaar ku tahay bilaash. Mar dambe ha sugin, ka faa'iidayso fursadda aad ku ilaaliso dukumeentigaaga hal codsi. Faa'iido leh, dhakhso badan oo ammaan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Cryptex, barnaamij ogeysiis lacag la'aan ah oo bilaash ah wakhti xaddidan